Sodàna: Nokendrena Manokana Ny Vehivavy #SudanRevolts · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2012 8:53 GMT
Mpikatroka Sodaney an’arivony no mbola notanana, anisan’izany ilay mpisera Twitter mavitrika sy malaza Usamah M. Ali (@simsimt), izay nalain’ny NISS ankeriny telo herinandro lasa izay
@AliahKhaled: Tsy voaisako intsony ny isan’ny baomba notifirina taminay nandritra io fotoana io. Baomba marobe mampihomehy & nitifitra lavitra izy ireo tao anatin'ny moske. ‪#SudanRevolts.
@AliahKhaled: Notazomiko ny tànan’ny reniko sy ny vavahadin’ny moske, nisy baomba mandatsa-dranomaso nalefa, tsy nisy afaka nandositra ny olona. ‪#SudanRevolts
@AliahKhaled: Voalohany tamiko no nahitako olona marobe mitaraina mafy noho ny fanaintanana sy ny toraky ny baomba mandatsa-dranomaso toy izao. ‪#SudanRevolts
@AliahKhaled: Raha tonga tao amin’ny biraon’ny ‪#NISS ao Omdurman izahay, tsy ho adinoko mihitsy ny nahita ireo tanora lehilahy MAROBE nosamborina, mipetraka miatrika ny rindrina
@AliahKhaled: Noarahabain’ny manam-pahefan’ny #NISS avy ny tsirairay tamin’ny fisamborana azy ireo & tamin’ny fahatongavan’ireo vaovao vosambotratao amin’ny HQ. Novazivazian’izy ireo ny anarana hoe Al Kandaka.
Nosamborin’ny NISS tao amin’ny Kandaka Friday niaraka tamin’ny zanany vavy ihany koa i Zeinab Badreldine, efa tao anatin’ny telo herinandro kosa no notànana ny zanany lahy. Noafahana ihany izy ireo taty aoriana, saingy mbola any ampigadrana kosa ilay zanany lahy. Iray amin’ireo andriambavilanitra an-jatony, vady, zanaka, rahavavy ary mpikambana manana ny maha-izy azy ao amin’ny fikambanana Sodàney niharan’ny herisetra, notànana sy nanaovan’ny NISS herisetra ara-tsaina ihany koa izy
Ankoatra ireo fisamborana marobe natao sy ny fikendrena manokana ireo mpikatroka sy mpanao fihetsiketsehana vehivavy, fantatra fa nisy ihany koa fanolànana sy ny fikasiha-tànana mahery vaika nihatra tamin’ireo vehivavy, tahaka an’i Halima Hussein Omar, mpianatra ao amin’ny Oniversite an’i Khartoum, izay niala ny masony iray raha iny izy handeha hianatra nandritra ny fihetsiketsehana.
@mighty_mo_1: Manomboka izao taona izao, hanontaniana ianao hoe… taiza ianao nandritra ny revolisiona? Inona no andraikitra norasainao tao anatin’izany? ‪#sudanrevolts
@mighty_mo_1: “Nogadraina” isika (ary mbola ho gadra foana) mandra-pialan’ny antokon’ny fitondrana NCP ‪#sudanrevolts
@AhmadMohamed10: Vetivety dia hirodana ny NCP (tsy misy fe-potoana) : ho azontsika ny fanesorana ny sazy, miditra ny vola amin’ny solitany avy amin’ny SS, mitombo ny fampiasam-bola vahiny ‪#SudanRevolts ‪#Sudan
@AguilB: Nandray anjara mavitrika tamin’ny tantara ny vehivavin’i Sodàna. Ho fanomezam-boninahitra an’i Abuk, Ajoba, & ny Kandake – SALUTE vehivavin’ny ‪#SudanRevolts
Avy any Ejipta kosa, ireo mpikatroka Ejipsiana no mandefa ny vaovao momba ny @SudanRevoltsOrg, mihevitra izy ireo fa zava-dehibe toy ny revolisiona Ejyptiana ihany koa ny revolisiona Sodaney